Cheetah Digital: Otu esi etinye aka na ndi ahia na Trust Economy | Martech Zone
Cheetah Digital: Otu esi etinye aka na ndi ahia na Economy Trust
Mọnde, Jenụwarị 25, 2021 Mọnde, Jenụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Ndị ahịa arụọla mgbidi iji chebe onwe ha megide ndị na-eme ihe ọjọọ, ma bulie ụkpụrụ ha maka ụdị ndị ha na-eji ego ha eme.
Ndị ahịa chọrọ ịzụta site na ụdị ndị na-egosighi naanị ọrụ mmekọrịta, mana ndị na-ege ntị, rịọ nkwenye, ma were nzuzo ha nke ọma. Nke a bụ ihe a na-akpọ ntụkwasị obi akụ na ụba, na ọ bụ ihe ụdị niile kwesịrị inwe na-ebute ụzọ nke atụmatụ ha.
Site na ndi mmadu ekpughere ihe kariri ozi ahia 5,000 kwa ubochi, udiri agha aghaghi ikeputa oge anwansi a nke na-adọrọ uche ma na-eme ka ndi ahia bia na ndi mmadu. Mana olee otu ndi ahia ahia gha esi gbasaa ahia mkpọtụ n’enweghị ụjọ?
Azịza ya bụ ịnye mgbanwe mgbanwe bara uru. Na uru mgbanwe bụ ebe ndị ahịa na-enye ndị na-azụ ahịa ihe maka nkwụghachi uche ha, itinye aka na data ha. Ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ mbelata ma ọ bụ leta-acha ọbara ọbara; nanị ọdịnaya, kudos na-elekọta mmadụ, nkwanye ahaziri iche, na isi iguzosi ike n'ihe nwekwara ike bụrụ ihe mkpalite maka nchịkọta opt-ins na akụkọ onwe onye, ​​data efu.
Branddị kwesịrị ịhapụ ịzụrụ dodgy, data nke atọ, na ịmụrụ ndị ahịa ihe, ma gbalịsie ike ka gị na ndị ahịa na-eme ihe n'eziokwu, kwụ ọtọ ma nwee mmekọrịta bara uru. Ọ bụghị naanị na nke a na-enye akara ngosi, mana inye mgbanwe ọnụahịa maka data ndị ahịa, itinye aka, na iguzosi ike n'ihe na-enyere ụdị aka ijikọ ndị ahịa ozugbo na ịchụpụ atụmatụ ndị ọzọ.
Ezigbo ahịa ọ bụla maara nke ọma n'oge ọgbọ nke ndị na-azụ ahịa bụ maka ịmepụta ahụmịhe ahaziri ahaziri nke na-ekwu maka mkpa ndị ahịa. Mana ka ha na-enwe ọ theụ na ịdịmma na mkpa ndị ọrụ ahaziri iche na-eweta, ndị na-azụ ahịa na-egbochi ngwa ngwa nke onwe ha ma chọọ ọnụọgụ nzuzo na ntanetị. Nsogbu a na-adịwanye njọ karị n'ihi oke ihere ntụkwasị obi na mmebi data nke na-eweta iwu na usoro nchebe data siri ike na-arịwanye elu. Mana data nkeonwe na ịzụ ahịa ezubere iche na-aga n'aka-na-aka.
Yabụ kedu ihe ahịa na-eme? Nke a bụ ihe nzuzo. Ndị ahịa n’otu oge na-atụ anya ihe nzuzo na ahaziri iche maka ahụmịhe. Enwere ike ịnapụta na abụọ? Azịza ya dị nkenke ee. N'iji usoro ohuru nke ndi ahia ahia, itinye aka na nchekwa na mpaghara obula nke nzukọ a, na nlezianya, omume na-adighi nma banyere njikwa ihe egwu, ndi ahia nwere ike izute ihe ndi ahia ha na-acho anya nke oma na ichikota, ma ka na-enwe obi uto ha site na data.
Cheetah Digital bụ onye na-eweta ihe ngwọta nke ndị na-enye aka maka ahịa maka oge a. Cheetah ghọtara ụdị nke taa chọrọ ihe ngwọta iji nye nchekwa, ikike ikike ịgafe ụzọ, ndị ọrụ mgbanwe ahịa bara uru na ahụmịhe nke onwe ha tụrụ anya n'ezie.
Tupu afọ a, Cheetah Digital bụ ghọtara maka ikpo okwu iguzosi ike n'ihe ya ma soro Vans rụọ ọrụ. Kwadoro site na Cheetah Loyalty, Vans mepụtara Vans Family, mmemme na mmekọrịta amamịghe kpụ ọkụ n'ọnụ ezubere iji mata, kwụghachi, ma mee emume ndị Fans maka onye ha bụ na ihe ha masịrị ime. Usoro ihe omume ahụ na-akwado mkparịta ụka ụzọ abụọ na ndị ahịa.
Ndị otu a na-enweta asọmpi na ahụmịhe na-enweghị atụ, akpụkpọ ụkwụ ahaziri iche na akụrụngwa, yana nyocha nke mbupute ngwaahịa na-abịa. Ọzọkwa, ndị otu na-enweta akara maka ịzụ ahịa na itinye aka na ika ahụ. N'ihe na-erughị afọ abụọ, Vans adọtala ihe karịrị nde mmadụ 10 na Vans Family na United States na ndị otu mmemme ji pasent 60 karịa ndị na-abụghị ndị otu.
Cheetah Dijitalụ Ahịa Aka Suite
Cheetah Dijitalụ Aka Ndị Ahịa Suite na-emepụta oge bara uru n'etiti ndị ahịa na ụdị. Ọ na - agwakọta omimi na obosara nke ikpo okwu data siri ike na ezigbo oge, ikike mmebe obe, n'otu usoro edozi. Ndị Ahịa Aka Aka Suite gụnyere:
Ahụmahụ Cheetah - Na-ewepụta ahụmịhe nnata mmekọrịta ndị ahịa dijitalụ nke na-enyere ụdị aka ịnakọta data mbụ na nke efu, ma nweta ikikere bara uru dị mkpa iji mezuo mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga nke ọma.
Cheetah Izi ozi - Na-eme ka ndị ahịa nwee ike ịmepụta ma nyefee mgbasa ozi ahịa ahaziri iche, gafere ọwa niile na akara aka.
Iguzosi Ike n'Ihe Cheetah - Na-enye ndị na-ere ahịa ngwá ọrụ iji mepụta ma nyefee mmemme iguzosi ike n'ihe pụrụ iche nke na-eme njikọ mmetụta uche n'etiti ụdị na ndị ahịa ha.
Platform Njikọ data Cheetah - Igwe nchekwa data na igwe nkeonwe nke na - enyere ndị ahịa aka ịchụpụ data sitere na nghọta nwere ọgụgụ isi rụọ ọrụ na ọsọ na ogo.
Site na ndị ahịa 3,000, ndị ọrụ 1,300, na ọnụnọ na mba 13, Cheetah Digital na-enyere ndị ahịa aka izipu ihe karịrị 1 ijeri ozi kwa ụbọchị.
Gwa Onye Cheet Che Dietekiri Ika
Tags: cheetah dijitalụcheetah ntinye aka data n'elu ikpo okwuAhụmahụ cheetahiguzosi ike n'ihecheetah izi oziahịa nnwetadataemail Marketingonye na-enye ọrụ emailespiguzosi ike n'ihe mmemmekeonwenzuzoihe nzuzontụkwasị obi akụ na ụbauru mgbanwe
Atụmatụ 3 maka usoro ịre ahịa email nke na-abawanye ọnụego mgbanwe
Ngwaọrụ WordPress kacha mma maka saịtị azụmahịa gị